ODM nhazi - Wonderful enterprise Co., Ltd.
Ihe karịrị 300 ugboro ihe ịga nke ọma na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụwa a ma ama ụdị.
20 Afọ kpụ ọkụ n'ọnụ cultivation a ụlọ ọrụ, na ọtụtụ edemede maka mmepe akwụkwọ.
Ndị otu R & D nwere ihe karịrị ndị na-eme nchọpụta ahịa 20, ndị na-enyocha ngwaahịa, ndị na-ese ihe nkiri, ndị na-ese ụkpụrụ ihe na ndị injinia elektrọnik.
N'otu oge, anyị nwere a n'elu ahịa otu. Ha bụ ezigbo ọkachamara ma nwee ike iwetara ndị ahịa ezigbo ahụmịhe oriri.
BSCI, ICTI, ISO, SQA, nyocha ụlọ ọrụ Coca-Cola, wdg.
URU ỌR AD
Afọ 20 nke mmepụta na imewe ahụmahụ na European na American luminous ọzọ, ịke na ọrụ imewe nwere ike na-na ahịa n'afọ iri na ụma.
Ihe nha nha
Mee ka mmekọrịta gị na ogologo oge na mmekọrịta gị na ndị na-eweta ngwaahịa iji belata ọnụahịa mmepụta.
anyị nwere enweghị ntụpọ mmepụta usoro, ịzụta usoro, ihe onwunwe akara usoro na àgwà usoro.
Anyị na-eji ọtụtụ asambodo ngwaahịa dị mma ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ maka ule na nnwale.
ỌR AD ỌR S
Nkwupụta ọsọ ọsọ
Eziokwu ziri ezi na 20 ma ọ bụ 30 nkeji.
Otu oru ngo puru iche na - agbaso, nzaghachi mmeputa nke Sunday.
Daysbọchị 3 iji kwado nkwupụta ngo na nkwupụta. Ọrụ nyocha ngwa ngwa nke ụbọchị 10 iji nyere aka mmepe ngwaahịa ọhụrụ.
Usoro ọrụ nkwụsị
Ọrụ nkwụsị site na ihe na ngwaahịa.
Usoro Nchedo Ngwongwo nke ọgụgụ isi
Debanye nkwekọrịta nzuzo, atọ nke ihe osise atọ na dọkụmentị.
Nlekọta ụlọ mgbe a na-ere ahịa
7 ụbọchị nkwụghachi na mgbanwe, ọnwa 12 dị mma.
Wepụta ọrụ ọrụ maka
IHE ND SC A NA-EME
Afọ 20 kpụ ọkụ n'ọnụ cultivation, na-akwado ndị ahịa hazie n'omume na ihe
Anim, ntụrụndụ, nkiri na telivishọn ọkwa
Ndị na-ere e-commerce na-ere ahịa n'efu
Ọhụrụ ngwaahịa ikpe mmepụta foundry idaha
IP emepụta ika
Malite-elu ika foundry
Cross-ókè-ala mwekota foundry idaha
AJQJ FA AJQJ FA
You nwere ike ịgwa m oge ọrụ gị?
Mọnde ruo Fraịde 9: 00-18: 00; emechi na Sọnde na ezumike mba.
Kedu nnukwu aha OEM nwere iFlash House maka?
Ndị otu "Islam House" ahụ na-arụ ọrụ miri emi na ahịa America na Europe, ma na-aga n'ihu na-enye ndị ahịa ngwaahịa ọhụrụ, dị iche na pụrụ iche (ihe mgbawa), bụ nke a na-ere nke ọma na United States, Europe na Japan. Ndị isi ọbịa gụnyere Disney (gụnyere US / France / Japan / China Hong Kong / China Shanghai Disney), American Wal-Mart / PartyCity / DOLLAR TREE / CVS, German PEARL, French Carrefour na Japan.
Enwere m ike ịme ihe nlele nke ngwaahịa gị?
Enwere ike ịlele ọtụtụ ngwaahịa, yana ngwaahịa ụfọdụ nwere ike ịnye iwu naanị mgbe usoro nrụpụta na ihe mepụtara. I nwekwara ike na-ezo aka anyị ẹdude ngwaahịa. A na-akwụ ụgwọ ego ụfọdụ maka ngwaahịa ahaziri iche. Maka nkọwapụta, biko kpọtụrụ ndị ọrụ anyị (0755-8237428).
Ngwaahịa gị ọ nwere ike ịkwado ogo ya?
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela aka na mmepe na nyocha nke ngwaahịa ndị na-enwu gbaa maka ememme na nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ma nwee nghọta miri emi banyere ngwaahịa ndị na-enwu gbaa. Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọkachamara pụrụ iche, ndị nyocha na ndị nyocha na-achịkwa ogo ngwaahịa. Meziwanye usoro mmepụta a nụchara anụcha, rụọ ọrụ nke ọma na usoro asambodo njikwa njikwa mma nke mba, jiri ọtụtụ asambodo ngwaahịa dị mma ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ maka ule na nnwale, na ngwaahịa niile na-eji ihe ndị a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi nke ROHS, nke na-ezute nchebe mba gburugburu ụwa.
Ebee ka adreesị nke IFlash House dị?
Mgbe ị banyere na peeji nke "Flashhụnanya Flash House", ọbịbịa gị bụ nkwado kasịnụ anyị, anyị ji obi anyị anabata ọbịbịa gị!
Flashhụnanya Flash House Exhibition Hall: Shenzhen Runde Fengshilai Co., Ltd., emi odude ke 14 ụlọ nke Yongtong Building, Renmin North Road, Luohu District, Shenzhen;
Production isi: Shenzhen Nuowei Te Electronics Co., Ltd., emi odude ke 200-1 Lianxin Road, Wulian Zhugu, Longgang District, Shenzhen;
Adaba njem, adaba maka ileta na nnyocha!
Ọ bụ ụlọ nrụpụta ka ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
"Flashhụnanya Flash House" bụ otu nnọkọ oriri na ọisụ partyụ sitere na United States, ọ bụkwa otu nkwụsị ahịa na-eweta ezumike na ngwaahịa ngwaahịa ọkụ! Ntọala na 2006 ma dị na District Longgang, Shenzhen, ọ bụ onye na-eweta nkwụsị nke ngwaahịa na-egbuke egbuke maka afọ 13. Companylọ ọrụ anyị nwere ụlọ ọrụ ya na akụrụngwa nrụpụta dị elu, ihe karịrị mita 4,000 nke oghere mmepụta ọkọlọtọ, yana R&D na ndị ọrụ ya. Ngwaahịa ọ bụla emepụtara agbanweela ule nyocha siri ike. Nkwado nhazi OEM, nhazi ODM, nhazi ya na eserese, nhazi ya na ihe nlere na ihe.